समाचार Archives | Page 55 of 64 | Daily State News
भैरहवा – भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी)ले सीमामा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण तथा मालबाहक सवारीसाधनको चेकजाँचमा कडाइ गरेपछि भैरहवा–सुनौली नाका प्रभावित भएको छ । अहिले भैरहवा–सुनौली नाकामा झन्डै पाँच सयभन्दा बढी मालबाहक सवारीसाधन जाममा परेका छन् । एसएसबीले भारत प्रवेश गर्ने सर्वसाधारण तथा सवारीसाधनलाई एक–एक गरी पूर्ण चेकजाँच गर्दा सीमामा मालबाहक सवारीसाधनको जाम बढेको हो । सर्वसाधारणले […]
वर्षभरी राजनीतिक जात्रा : आज गाईजात्रा (फोटोफिचर)
क्तपुर : काठमाडौं उपत्यकालगायत नेपालभाषीको सघन बसोबास रहेका ठाउँमा मंगलबार सापारु (गाईजात्रा) भव्यतासाथ मनाइएको छ। नेपालभाषी समुदायले सापारुलाई मृत्यु संस्कारसँग सम्बन्धित पर्वका रूपमा मनाउँछन्। वर्षभरि दिवंगत भएकाको सम्मान तथा सम्झनामा भदौ शुक्ल प्रतिपदाको दिन गाईको प्रतीक बनाई आ(आफ्नो नगर परिक्रमा गराइन्छ। धार्मिक परम्पराअनुसार भाद्र प्रतिपदाको एक दिन मात्र यमलोकको ढोका खुला हुने जनविश्वास छ। यही […]
गाईजात्रे व्यङ्ग्य: चारगिरी अर्थात् चालुगिरी, ठालुगिरी, लालुगिरी र भालुगिरी
भन्ज्याङ, चार नारायण, चार विनायक, चार नारायण, चार बाराही, चार वर्ण, चार वेद, चार धाम, चार पास इत्यादिको चर्चा चारै दिशामा थियो र छ । तर चारगिरीको चर्चै छैन।त्यसैले यीबारे थोरै चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु । चालुगिरी, ठालुगिरी, लालुगिरी र भालुगिरी हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक जीवनका चारवटा खम्बा हुँदै आएका छन्। यिनैलाई भन्नुपर्छ चारगिरी। धवलागिरी वा चन्द्रागिरी वा नीलगिरीकै हाराहारी छन् गर्वका यी पहाडहरू। चालुगिरी भनेको एकदमै […]
दिवंगत आत्मालाई सम्झिएर गाईजात्रा मनाइँदै, उपत्यकामा आज सार्वजनिक विदा
२४ साउन, काठमाडौं । भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म आठ दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक उत्सव ‘गाईजात्रा’ आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । एक वर्षभित्र दिवङ्गत आफन्तको सम्झनामा आज गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिँगारी आ–आफ्ना इलाकामा परिक्रमा गराइने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गरिन्छ । यसरी नगर […]
महानगरका मेयर-उपमेयरलाई २ करोडको गाडी
काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले मेयर र उपमेयरका लागि दुई करोडभन्दा बढी मूल्यका गाडी खरिद गरेको छ। महानगरले मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ पर्ने र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई ८६ लाख मूल्य पर्ने गाडी खरिद गरेको हो। मेयर शाक्यले चढ्ने टोयोटा कम्पनीको विलासी गाडी महानगरपालिकाको कार्यालयमा आइसकेको छ भने उपमेयर खड्गीको गाडी आउन बाँकी छ। स्रोतका […]
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभा दुवै तहको चुनाव एउटै मितिमा गर्नेगरी तयारी थाल्न निर्वाचन आयुक्तसँग आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीसँग सोमबार भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री देउवाले दुवै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्नेगरी तयारी गर्न आग्रह गरेका हुन्। ‘खर्च कम गर्न र तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न दुवै चुनाव एउटै मितिमा गर्नेगरी तयारी […]
चितवन—भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदमा पराजित एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले आफ्नो पराजयका कारणहरु पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका छन्। ‘मतपत्र च्यातेपछि निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय दियो त्यसरी जाँदा अन्याय हुन्छ भनेर म सर्वोच्च अदालत गएँ। तर अदालतले निर्णय दिन अबेला गर्‍यो। त्यसको असर मलाई पर्‍यो’ सोमबार एमाले चितवनको कार्यालय भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने। ‘जेठ […]
मनमोहन र बीएण्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने !
२३ साउन, काठमाडौं । संसदीय समितिले मनमोहन र बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन सकिने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने भएको छ । संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति अन्तरर्गतको कार्यदलले सोमबार विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गर्ने सहमति जुटाएको छ । आशयपत्र प्राप्त गरी भौतिक पूर्वाधार बनाएका र निरीक्षण भइसकेकालाई सम्वन्धन […]
२३ साउन, पोखरा । के तपाईंलाई सामान्य भन्दा बढी नै ज्वरो आएको छ ? वा तीन दिनसम्म पनि ज्वरो घटेन र रुघाखोकी समेत लागिरहेको छ ? यदी यसो हो भने तपाईंलाई मौसमी रुघाखोकी (ईन्फ्लूएञ्जा) अर्थात स्वाइन फ्लू भएको हुनसक्छ । ईन्फ्लूएञ्जा ‘ए’.’बी’ र ‘सी’ गरेर तीन प्रकारका हुन्छन् । जसमध्ये ‘ए’मा पर्ने एचवानए संक्रमण भए संक्रमित व्यक्तिको ज्यानै पनि […]
स्क्रब टाइफसबाट चितवनमा एक जनाको मृत्यु
स्वाइनफ्लुका १०० बिरामी भेटिए २३ साउन, चितवन । चितवनमा स्क्रब टाइफसबाट एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार चितवनको नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा नवलपरासी रजहरकी २४ वर्षीया एक महिलाको उक्त रोगका कारण मृत्यु भएको हो । यो आव लागेपछि स्क्रब टाइफसबाट मृत्यु भएको यो पहिलो हो । उनले जिल्लामा साउन महिनाको […]
कुवेतमा ‘बेचिएकी’ पाँचथरकी बिमलाको उद्धार
२३ साउन, काठमाडौं । कुवेतमा ‘बेचिएकी’ पाँचथरकी बिमला न्यौपानेको उद्धार भएको छ ।चार महिनाअघि भारत हुँदै कुवेतमा बेचिएकी न्यौपानेको गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा उद्धार गरिएको हो । उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएपछि पीडित न्यौपाने श्रीमानसहित गृह मन्त्रालय पुगेर मन्त्री शर्मासँग भेट गरेकी छन् । शर्मा गृहमन्त्री भएसँगै स्थापना गरिएको गुनासो व्यवस्थापन कक्षमा श्रीमान नवीन शर्माले उजुरी […]
लम्जुङ एफ सि दक्षिण कोरिया...
748 पटक शेयर गरिएको
तेस्रो गुनसान नेपाल कप फूट...
44 पटक शेयर गरिएको
रिदम लाइभ कन्सर्ट आयोजकले ...
15 पटक शेयर गरिएको